Garachico, ọdachi na njem nleta | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Nduzi, Tenerife
Tenerife Ọ bụ otu n’ime agwaetiti ndị Canary, otu nnukwu agwaetiti na ọtụtụ mmadụ bi na ha. Ebe a, na n'ụsọ oké osimiri, bụ obodo nke Garachico. Ọ bụ a mara mma na saịtị, na ọtụtụ ochie ụlọ na ọdọ mmiri na-adọta ndị njem nleta iji nwee ọ bathụ ịsa ahụ dị mma.
Akụkọ ihe mere eme na-ekwu na otu ụbọchị na 1706, ugwu mgbawa nke Trevejo gbawara ma bibie ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, nke kachasị mkpa n'àgwàetiti ahụ n'etiti narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX, njikọ dị n'etiti America na Europe. Oge ọla edo nke obodo ahụ kwụsịrị, mana ọkwa ọzọ ga-amalite ma emechaa ma taa enwere ike ịsị na ọ bụ otu n'ime ndị kasị maa mma obodo na Tenerife.
2 Garachico njem nleta
Obodo tọrọ ntọala na 1496 n’aka otu onye ọchụnta ego Genoese aha ya bụ Cristóbal de Ponte. Mgbe e mesịrị, ọ mepụtara ọdụ ụgbọ mmiri ya dị mkpa nke ha si, na-ejikọ America na Europe na mmanya na shuga, ọtụtụ ụgbọ mmiri.
Mgbawa ugwu nke ugwu mgbawa abụghị naanị ọdachi n'obodo ahụ n'ihi na na narị afọ gara aga, mbuze gburu otu narị mmadụ wee gbuo ọtụtụ ụgbọ mmiri, mana enweghị mgbagha ugwu mgbawa ga-agbanwe akụkọ ihe mere eme nke obodo ruo mgbe ebighị ebi. Lava kpochapụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo ahụ dum wee kpuchie ọdụ ụgbọ mmiri ka afọ ahịa ọlaedo ahụ biri ma ... otu lava nke o bibiri wuru ihe ohuru: pudulu, ọdọ mmiri.
Taa ndị a eke ọdọ mmiri na-mara site aha Caleton ma na-adọta ndị njem nleta na ndị njem. Ha, ya na obodo ochie ahụ, okporo ámá ndị a gbara agba, ụlọ ochie na chọọchị dị iche iche, na-eme Garachico ọmarịcha ebe mara mma ileta na Tenerife.
Garachico nwere ọtụtụ osisi pine, ugwu mgbawa na ugwu nke na-ekewa gburugburu obodo ahụ site na etiti akụkọ ihe mere eme. N'ihi na ya akụkọ ihe mere eme n'okporo ámá bụ na 1994 ọ na-kwuru Akụ nke Mmasị Omenala na ebe ọ bụ na tupu, kemgbe 1916, ọ bụ Villa y Puerto, dị ka iwu nke Eze Alfonso XIII.
Garachico njem nleta
Ka anyị kwuo banyere Garachico ebe nkiri. Na mbụ anyị kwuru na ọ nwere ọtụtụ ụlọ akụkọ ihe mere eme ya mere n'etiti ha anyị nwere ike ịkpọ aha Oflọ Ponte, ụlọ mara mma na nke oroma nke ezinụlọ ntọala nke obodo ahụ. Ọ malitere na narị afọ nke XNUMX na ọ bụ ezie na ọkụ bibiri ya, e wughachiri ya ma taa ọ bụ ụlọ nkwari akụ ka ị nwee ike ịnọ na ya.
La Oflọ Mills ọ bụghị ihe ọ bụla ọzọ karịa naanị ntụ ọka ntụ ọka nke fọdụrụ n'ime obodo ahụ. Ọ dịghị mfe ịhụ, ọ na-apụtaghị nke ọma n'ihi na ọ bụghị n'okporo ámá kama ọ dị ntakịrị ala, mana ọ bụrụ na ịchọrọ mkparịta ụka ị nwere ike ịga ije n'ihi na ọ na-egosi ihe ngosi n'okwu a. Enwere ọtụtụ igwe igwe, ee, mana ha furu na narị afọ nke XNUMX.
La Palacelọ Obí nke Ọnụ La Gomera, nke a makwaara dị ka Stonelọ Nkume, nwere akụkụ ya dum nke okwute na-acha ntụ ntụ na ọnụ ụzọ osisi mara mma. E wuru ya n’agbata narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX ma bụrụkwa nke e wughachiri mgbe ugwu ahụ gbawara. Na Oflọ nke Marques de la Quinta Roja Ọ bụ site na njedebe nke narị afọ nke XNUMX na mgbe mbụ marquis gbanwetụrụ ya. Ọ bụbu ebe obibi ndị nọn Franciscan ma taa, ọ bụ ụlọ mbikọ ime mmụọ.
Historicallọ ọzọ mere eme bụ Ụlọ elu San Miguel, nyere iwu ka ewu ya na 1575 site n'aka Eze Felipe II, dị ka ihe nchebe megide mwakpo ndị nwere ike. Lọ nke guzogidere mwakpo nke lava bụ Franciscan Conceptionists Ndị Nku nke afọ 1643. O merikwara ọkụ na ebili mmiri n’etiti narị afọ nke XNUMX. Ọ bụ naanị ebe obibi ndị nọn dị na Garachico nke dịgidere ruo taa.
Lọ ọzọ nke nwere ọdịdị okpukperechi bụ Ebe obibi ndị nọn Dominican nke Santo Domingo. Azoputara ya site na oke iwe nke ugwu onodu site na onodu ya ka odi ya, ya na mbara ihu ya. Taa ọ na-arụ ọrụ dị ka ebe ngosi nka nke nka, ọ bụkwa ụlọ ezumezu ime obodo na ebe obibi maka ndị agadi. E nwekwara Church nne nke Santa Ana na Hermitage nke San Roque.
Na mgbakwunye na akụ ndị a na akụkọ ihe mere eme, taa ndị mmadụ na-abịa Garachico nke ọdọ mmiri ya, ọdọ mmiri ya, ya ọdọ mmiri. Ihe a na-akpọ El Caletón. Ebe a dị n'ụsọ oké osimiri nke a na-eji taa emee site na mgbawa ugwu mgbawa na 1706. Mgbe lava hapụrụ obodo ahụ n'azụ, ọ gara n'ihu n'okporo mmiri ya na mgbe ọ rutere ebe ahụ, ọ mepụtara ọdọ mmiri ndị a nke ọdịdị na-adịghị mma na nke na-enweghị atụ. .
N'oge ọkọchị ha jupụtara na ndị njem na-agbanahụ okpomọkụ. Mmiri ya na-adịkarị jụụ mana ọ ka bụ oke osimiri yabụ ọ bụrụ na oke osimiri ahụ amịpụta, ị ga-akpachara anya maka ebili mmiri dị ịtụnanya. Ozugbo ị gụchara ịmịnye mmiri na ịnụ ụtọ mmiri ị nwere ike ịnwale gastronomy mpaghara dabere na azụ a na-enye n'ọtụtụ ụlọ nri na mpaghara ahụ. Azu obodo na poteto al mojo, nri kacha mma.
N'oge ọkọchị Garachico na-ewu ewu, ma obu kwa mgbe enwere nnọkọ ime obodo dị ka nke San Roque, njem uka a na-eme na August 16, otu n'ime ewu ewu na Canary Islands. E nwekwara ndị Ememme na-enwu gbaa na nsọpụrụ nke Kraịst nke Ebere, nke a na-ahazi naanị afọ ise ọ bụla, nke a na-eji okooko osisi chọọ okporo ámá ya mma ma nwekwaa mmiri na-aga n'okporo ámá. Ememme ndị a bụ n'etiti July 31 na August 1 na oge kachasị mkpa bụ Fuegos del Risco.
Nke na-esote Ọkụ nke Risco Ha nọ na 2020 ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ukwu, echefula ha n'ihi na ndị Garachico tụbara bọọlụ site na elu ugwu ahụ. Bọọlụ ndị a na-agbaso ụzọ nke lava si site na ugwu mgbawa ruo n'oké osimiri na 1706. Ọ bụ ụzọ iji mee ememme ma ọ bụ cheta ọdachi ahụ nke mechara bụrụ ndọta ndị njem nke obodo ahụ.
"Ebube na nsogbu", nke ahụ bụ ụkpụrụ nke Garachico, na mgbe ọ nọrọ ụbọchị ole na ole ebe a, a ghọtara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Tenerife » Garachico, ọdachi na njem nleta